कोरोना भाइरससंग लडन अनेक खालका प्रयोग हुँदैछन्, के के गरिदै छ ? | Pennepal
Home अन्तराष्ट्रिय कोरोना भाइरससंग लडन अनेक खालका प्रयोग हुँदैछन्, के के गरिदै छ ?
एजेन्सी । कोरोना भाइरसविरुद्धको औषधि खोज्न वैज्ञानिकहरूले विश्वभरी अनेक खालका प्रयोग र प्रयास जारी राखेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिकित्सकको हवाला दिदैं औलो प्रतिरोधि ट्याब्लेट हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनलाई कोभिड –१९का लागि सटिक औषधि भएको बताएका छन् ।
केही अमेरिकी र ब्रिटिस वैज्ञानिकले भियाग्रा बनाउन प्रयोग हुने ग्यास नाइट्रिक अक्साइडलाई पनि परीक्षण गरिरुहेका छन । ती वैज्ञानिकलाई यो ग्यासबाट कोरोनाको औषधि बनाउन सकिने आश छ । योबाहेक ब्लुटुथ डिभाइसबाट कोरोना संक्रमण रोक्न सहायता लिइएको पनि छ ।
नाइट्रिक अक्साइड, जसबाट भियाग्रा बनाइन्छ
अमेरिका र ब्रिटेनका छ जना वैज्ञानिक नाइट्रिक अक्साइडको परीक्षण गरिरहेका छन्, जसले कलेजोमा रगत पुर्याउन सहयोग गर्छ र भेन्टिलेटरमा पुर्याउनबाट जोगाउँछ । यो औषधि यति महत्वपूर्ण मानिन्छ की १९९२ मा यसलाई साइन्स जर्नलमा ‘म्यानुअल अफ द इयर’ अवार्ड दिइएको थियो । १९९८ मा यसैको परीक्षणका लागि नोवेल पनि पाइसकेको छ । यो ग्यासको प्रयोग भियग्रा बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
कलेजोको कुन कोशिकालाई कोरोनाले प्रभावित पार्छ भन्ने पत्ता लाग्यो
वैज्ञानिकहरूले नोवेल कोरोना भाइरसले कलेजोको कुन चाँही कोशिकालाई आफ्नो शिकार बनाउँछ भन्ने पत्ता लगाएका छन् । यो खोज कोभिड –१९ को औषधि बनाउन धेरै महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ । जर्मनका वैज्ञानिकले कलेजोका क्यान्सर भएका रोगी र स्वस्थ्य श्वास प्रणाली भएका मानिसको अध्ययनबाट यो पत्ता लगाएको बताइएको छ ।
यसबाहेक बाथको औषधिबाट पनि कोरोनाको उपचार गर्न सकिन्छ कि भनेर परीक्षण भइरहेको छ । बेलायती एक कम्पनीले यसको परीक्षण भइरहेको बताएको हो । कम्पनीले रोग प्रतिरोधि क्षमतासंग लडिरहेका मानिसका लागि यो औषधि पनि कारगर हुनसक्ने बलियो सम्भावना रहेको बताएको छ ।
मोवयलले पत्ता लगाउँछ कोरोना संक्रमित
जर्मनमा व्यक्तिको गोपनियतालाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ तर, यहाँ कोरोना भाइरसका लागि एउटा मोवाइल एपको प्रयोग गर्ने निर्णय लिइएको छ । यो फोन एपले ब्लुटुथमार्फत संक्रमितको तथ्यांक संकलन गर्छ र कोही व्यक्ति उसको सम्पर्कमा पुग्न लागे तत्काल म्यासेज पठाएर सतर्क गराउँछ ।